Maalinta Caalamiga ah ee Biyaha oo Muqdisho laga xusay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Maalinta Caalamiga ah ee Biyaha oo Muqdisho laga xusay
Muqdisho (SNTV) Munaasabadan oo lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee biyaha adduunka oo ay ka qeyb galeen mas’uuliyiin kaladuwan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho,kaasi oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Tamarta iyo Khayraadka Biyaha Xukuumadda Soomaaliya.
ayaa waxaa ka qeybgalay kusimaha wasiirka,tamarta iyo khayraadka biyaha Soomaaliya ahna wasiir kuxigeen mudane Cismaan Libaax Ibraahim,Jamaal Maxamed Xasan Wasiirka Qorsheynta iyo horumarinta Dhaqaalaha,Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaradah Khadiijo Maxamed Diiriye,Wasiirka macdanta iyo Batroolka,,wasiir kuxigeenka caafimaadka Maxamed Siciid ,guddoomiyaha gudiga khayraadka Qaranka,Dhaqaalaha iyo Gaadiidka Aqalka Sare Senator Ilyees Cali Xasan iyo mas’uuliyiin kale.
Mas’uuliyiintii ka hadlay munaasabadda ayaa siweyn uga hadlay muhiimadda ay leedahay in shacabka Soomaaliyeed ay helaan adeega biyaha meelkasta oo ay joogaan.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda Tamarta iyo Khayraad Biyaha Xukuumadda Soomaaliya C/waaxid Ibraahim Axmed ayaa sheegay in qorshaha Wasaaradda uu yahay sidii loo gaarsiin lahaa bulshada Soomaaliyeed biyho nadiif ah oo ku filan.
Mudane Cismaan Libaax Ibraahim Wasiirka Tamarta iyo Khayraadka Biyaha Xukuumadda Soomaaliya ayaa ka Hadley waxqabadka wasaaradda iyo qorshaha horyaala,isagoo xusay in ay wadaan qorshe ah sidii ceelbiyoodyo looga qodi lahaa gobolada dalka.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo diyaarisay qorshe cusub oo dalka looga xoreynayo maleeshiyada Al-Shabaab